Sida Lacagta Somaliland U Qiimo Beeshay Ayuu Buuggan Kulmiye U Qiimo La'yey
Sida Lacagta Somaliland U Qiimo Beeshay Ayuu Buuggan Kulmiye U Qiimo La'yey
Wednesday September 13, 2017 - 21:21:38 in by Samiir Cabdi
Xaaladda dalku halkay marayso, Dekedii Berbera xaalkeedu halkuu marayo, shaqo la’aanta dhalinyaradu halkay marayso, Sicir bararku halkuu marayo, qabyaaladda iyo musuq maasaqu halkuu marayo, caafimaadarada madaxweynuhu halkuu marayo iyo warmoogaantiisu, ictiraafkii halkuu marayo ee uu ku dambeeyey, xisbiga kulmiye hadhaagiisu halkuu marayo ee rajo xumaanta ah dawladdaa noo eexanaysa iyagoo dadkii waxwalba la socda horta BUUGGA KULMIYE HALKAASUU MARAYAA. JELDI KASTOO QURUX BADAN HADDII BUUGGA KULMIYE LOO SAMEEYO DADKU WAXAY KA DHEREGSANYIHIIN WAXA KULMIYE GUDIHIISA KU QORAN EE KA JIRO. XITAA PROF SAMATER BAA KU DHICILA WAX UU UGU OLOLEEYO MAXAA YEELAY HORUUMARKUU KA HADLO OO DHAN IYO XAALKA KULMIYE WAY IS QABAN LA’DAY.
Murashaxa xisbiga Kulmiye shalay wuxuu
ummadda horteeda ka qiray oo kaga khudbadeeyey sharcigii Xusbiga waa la ii jebiyey oo Gudoomiyii keligay la ii xidhay oo hadana waa la ii sii kala jebiyey sharcigii oo murashaxnimadii baa ciidan la iigu qabtay imika dhaartii uun baa ii hadhay madaxweynenimada waa ii xidhantay oo iyana ciidankaa ku boobaabayaa.sidaa ayaa buugga Kulmiye ku qoran hubaal waana Xukuumad Somaliland ah dhammaadkeedii. Intaa ka dib sharcigii iyo dawladnimadii Somaliland iyo ictiraafdopnkii halkaas buu ku dhammaaday, lacag iyo baayacmushtari iyo cashuur wax weliba halkaas way istaagayaan. Buugga Kulmiye iyo Kulmiyaha cusubi sidaas buu noqonayaa.
Fursadda qudha ee Somaliland nimadu haysataa waa Madaxweyne Silaanyo oo joojiya ninkan Muse ee uu sharciga wadanka u burburinayo waayo wadanku wax lagu khamaaro wuu ka weynyey. Daarood baa Somali Republic ku soo khammaaray oo iska dhaadhiciyey Afweynaa Janno ina geynaya halkuu wadankii maray waa aragtaan (LAXMU SUQAAR BAY NOQDEEN). Kuwan jeclaaday in distoorka Muse loo burburiyo riyadii Afweyne iyo dadkiisoo kalay ku riyoonayaan. Waxaa dantu ku jirtaa doorasho xalaala oo ninkii helaa ina hogaamiyo laakiin hadduu silaanyo doorto wadadan anaa Muse qasab iyo buug kulmiye oo madhan ku saaraya aynu sugno xaaladda wadanka siday noqoto.
Intee in leeg baa wadanku ku dhaqmi karaa bilaa distoor iyo bilaa sharci .waxaana Kulmiyaa bilaabay.
Runtii sida lacagta Somaliland u qiimo beeshay ayaa buuggan Kulmiye u qiimo la’yey. Waxaa hortaalla waxaad leediin berri waan qaban maxaa maanta u qaban la’dihiin . Runtii wadanku xaalad cusub oo wax walba qiimo beelayaan baa la gelayaa. Waxaa la gelayaa madaxweyne aan la dooran, Gudoomiye baarlamaan aan la dooran, Gudoomiye Guurti aan la dooran, Maxkammada sare oo xaalkeedu sidii iyo si ka daran noqonayo.wax walba (grey, misuse and confusion) baa la gelayaa haddii Madaxweyne Silaanyo u boobo doorashada Muse Biixi. Muse wixii ka dambeeyaa xaalad mugdi iyo dagaala.